दक्षिण कोरियामा कोरोना भाईरसको चौँथो लहर,दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या उकालो लाग्दै ! – Korea Pati
July 25, 2021 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on दक्षिण कोरियामा कोरोना भाईरसको चौँथो लहर,दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या उकालो लाग्दै !
पछिल्लो केही हप्तादेखि दक्षिण कोरियामा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट डेल्टा देखिएसँगै कोरोना भाइरस सङ्क्रमण चौथो लहरमा प्रवेश गरेको छ । यसले महामारीको रूप लिन थालेपछि अस्पतालमा आईसीयू शय्यासमेत अभाव हुन थालेको छ ।
दैनिक दुई हजारको हाराहारीमा कोरोना सङ्क्रमित थपिएका कोरिया रोग निवारण केन्द्रले जनाएको छ । सङ्क्रमित हुनेमा कोरियन नागरिकसँगै अन्य देशबाट आएका नागरिकसमेत छन् ।
केही हप्तादेखि थपिएका सङ्क्रमितमा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस (डेल्टा भेरियन्ट)को समेत लक्षण देखिएको स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ । यसरी नयाँ प्रजातिको भाइरस लक्षण देखिनेमा हालसम्म एक हजारबढी बढी छन् । यो भाइरस उच्च गतिमा सङ्क्रमण हुने गर्दछ ।